Safka Macquulka ah ee ay Manchester United ku soo geli doonto Garoonka Kulanka Chelsea iyo dhaawacyada ka maqan? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Safka Macquulka ah ee ay Manchester United ku soo geli doonto Garoonka Kulanka Chelsea iyo dhaawacyada ka maqan?
(19-10-2018) Kooxda Kubada Cagta Manchester United ayaa isku diyaarineysa kulanka xiisaha badan ee ay lacayaari doonaan Sabtiga Kulankaas oo ka mid ah Cayaaraha loo qabtay Macalin Jose Mourinho in uu ku bad baadsado shaqadiisa.
Macalinka Red Devils ayaa ka bad baaday in uu xilkiisa waayo kadib markii uu dirqi kaga badiyey kooxda Newcastle United oo kala hor martay 2 Gool balse lama oga in uu ku bad baadi doono Garoonka Stamford Bridge oo ah meel uu ku leeyahay Taariikh qurux badan balse laga baqayo in lagu soo gaba gabeeyo Mustaqbalkiisa Manchester united.
Waxaa lahubaa in kulankaan uu dhaawac ku seegi doono Cayaaryahanka Jesse Lingard halka shaki badan kujiro Cayaartoyda kala ah Marcos Rojo (knock), Ander Herrera (knock), Luke Shaw (ankle), Nemanja Matic (ankle), Scott McTominay (knee), Marouane Fellaini (groin)
Hadaba Safka Macquulka ah ee uu Garoonka ku soo geli karayo Jose Mourinho?